यसरी बनेको थियो राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइन्, चन्द्र-सूर्य र त्रिकोणको अर्थ के ? — Imandarmedia.com
यसरी बनेको थियो राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइन्, चन्द्र-सूर्य र त्रिकोणको अर्थ के ?
काठमाडौँको टङ्गालमा जन्मिएका रिमालले कोलकाता विश्वविद्यालय अन्तरगत बङ्गाल इञ्जिनीयरिङ कलेजबाट सन् १९५७ मा इञ्जिनियरिङ पास गरेका हुन् । त्यसपछि उनी सदर पब्लिक निक्सारी अड्डामा जागिरे थिए । विसं २०१८ वैशाख १ गते राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन भएको राजधानीकै आकर्षक शहीदगेट उनले नै डिजाइन गरेका हुन् । होटल सोल्टी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, अमृत साइन्स कलेज, शान्तिगृह, शारदा सदन, भैरहवा र पोखराको नेपाल राष्ट्र बैंक उनकै डिजाइनमा तयार भएको हो ।
तीन बाई चारको रेक्टेङगललाई हेरेर चन्द्रसूर्यलाई डायग्राममा तयार पारिएको उनी बताउँछन् । रङ फेर्नुपर्छ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो तर गोपालप्रसाद रिमालले ‘रातो र चन्द्रसूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’ भनेर लेख्नुभएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्दा परम्परा बिग्रन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो ।सिम्रिक रङ विवाह, व्रतबन्धलगायत कुनै शुभकार्य, चुनाव लड्दा होस् या घरमा बिदाइ हुँदा होस् या होलीमा होस् हरेक समय प्रयोग हुन्छ ।
महिलाको सौभाग्यको रङ पनि रातो हो । शक्ति र क्रान्तिको रङ पनि रातो हो । त्यसकारण यति धेरै कुरा मिल्ने हुँदाहुँदै परिवर्तन गर्न मनले मानेन । रिमालले थपे, ‘नीलो भनेको शान्ति, जल र आकाशको पनि रङ भो । त्यो अनन्तकाललाई मास्ने कुरै भएन । सेतोको अर्थ शुद्ध अथवा पवित्रता भइहाल्यो ।’
चन्द्र र सूर्यको प्रयोग- झण्डाको माथिल्लो भागमा चन्द्रमा र तल्लो भागमा सूर्यको प्रयोग हुन्छ । सूर्यको बाह्र कला हुन्छ भन्ने मान्यता छ । चन्द्रमाको १६ कला हो । कसैले माथि सूर्य राख्ने कसैले चन्द्र माथि राख्ने गर्थे । हालको झण्डामा माथि चन्द्रमाको आठ कला मात्रै देखिएको छ । तल सूर्यको १२ कला छ ।
चन्द्र र सूर्य अनुपम- पाकिस्तानको चन्द्र बेग्लै छ । जापानले सूर्योदयको देश भनेर सूर्य राखेको छ । हाम्रो सूर्य र चन्द्रको उपयोग फरक छ । धेरै देशले सूर्य र चन्द्र प्रयोग गरेका छन् तर हाम्रो व्याख्यासँग कसैको मिल्दैन ।
त्रिकोण किन- त्रिकोण आकारको नेपालको झण्डा विश्वकै एक मात्र हो । सबै देशको झण्डा चार कुना छ । हाम्रो झण्डाको माथिल्लो त्रिकोणको माथिको भाग ५७.९४४११ डिग्रीको कोणमा बनेको छ । त्यसको अर्को छेउको दायाँ कुना ३२.७५५८९ डिग्रीको छ । तल्लो त्रिकोण केही ठूलो छ । त्यसको बायाँ कुना ९० डिग्रीको छ भने दायाँ छेउको कुना ४५ डिग्रीको छ । तलमाथिको छेउको रातो भागको चोसो बराबर रेखामा हुन्छ भने माथिको नीलो चोसो अलिकति बाहिर जान्छ ।
घरघरमा झण्डा- अमेरिकामा हरेक व्यक्तिले घरमा र मोटरमा समेत झण्डा राख्न पाउँछन् । अहिले सरकारले नागरिकले समेत झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गरेका मा रिमाल खुशी छन् । ‘ढिलै भएपनि सरकारले बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको छ, आफ्नो गौरव हो, हरेकको घरमा राख्न किन नदिने ?’ उनले खुशी हुँदै भने ।
अमेरिकामा झण्डा फ्याँक्न पाइँदैन । लडाउन र रङ पोत्न पनि पाइँदैन । सबैले पालना गरेका छन् । नेपालमा भने सरकाले जनतालाई झण्डा प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले यही असोज ३ गते संविधान दिवस नै झण्डामय बनाएर मनाउन लागेको सुन्दा रिमाल औधि खुशी रहेका छन् ।
‘पहिले नै गर्नुपर्ने काम ढिलै भए पनि गरेकामा सरकारलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ खुशी हुँदै रिमालले भने । यस वर्षको संविधान दिवसको नारा नै ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔँ, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ’ भन्ने छ ।